साप्ताहिक राशिफल : माघ २ देखि ८ गतेसम्म कसको भाग्य कस्तो रहला ?
काठमाडाैं | माघ २, २०७८
यो साता तपाई आफ्नो प्रयासहरू बढाएर जीवनमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईको मार्गमा बाधा पुर्‍याउने मानिस तपाईँबाट टाढा हुन थाल्नेछ । सम्बन्धहरूमा धेरै समय बर्बाद नगर्नुहोस् जहाँ कटुता वा दुराचारी चलिरहेछ । अप्ठ्यारा कामको बोझ थपिन सक्छ । आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन् । अरूको विश्वास गर्दा धोका पाइएला । अवसरका लागि केही दौडधूप गर्नुपरे पनि रोकिएका कामहरू बिस्तारै सुरु हुनेछन् ।
यो हप्ता तपाईले चाहनु भएको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम गर्न एक ठूलो सन्धि पाउनुहुनेछ । कामको चाप बढ्नेछ । स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला । बोलीको प्रभावले फाइदा उठाउन सकिनेछ । मेहनतले धेरै काम बनाउन सकिनेछ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ । समुदायको हक हितको संरक्षण गर्दै धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सकिनेछ ।
अस्वस्थ शरीर लिएर काममा जुट्नुपर्ने हुन सक्छ । पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमल बढ्न सक्छ । गोपनीयता बाहिरिनाले पनि केही समस्या आइपर्ला । आम्दानी रोकिनाले योजना स्थगन हुन सक्छ । हिम्मत गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् । प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई परास्त गर्न सकिनेछ । रोकिएका काम बन्नाले आर्थिक पक्ष पनि सबल बन्नेछ । मेहनत गर्दा पहिले रोकिएको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।
प्रेमसँग सम्बन्धित तपाइँका विचारहरू परिवर्तन गर्न सुरू हुनेछ, जसको कारण तपाइँ सही साथी छनौट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ । स्वास्थ्यमा पानी उचित मात्रामा प्रयोग गर्नुहोस् र शरीरमा डिहाइड्रसन बढ्न नदिनुहोस् । व्यापारमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएला । ईर्ष्या गर्नेहरूले काममा अवरोध पुर्याउलान् । आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला । सन्दर पहिरनमा सजिएर बोलीको माध्यमले धेरैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउन सकिनेछ ।
तपाई आफूलाई आवश्यक भन्दा बढि आलोचना गर्ने मूडमा हुनुहुन्छ । तपाईलाई यो पनि थाहा छ कि तपाईको धेरै चिन्ता व्यर्थ छ, तैपनि तपाई चिन्तित हुनुहुन्छ । बुधबार द्रव्य-प्राप्तिले मन खुशी हुनेछ । मेहनतले आम्दानी बढाउन सकिनेछ । श्रमको उचित मूल्यांकन होला । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । कामबाट मनग्य धन लाभ हुन सक्छ । आम्दानी बढ्नेछ, परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन् ।
काम बिग्रने भयले सताउनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनु पर्ला । आम्दानी आउनाले योजना पुरा हुन सक्छ । स्वास्थ्य: छाती सम्बन्धित असुविधा हुनसक्छ । कुरा लगाउनेहरूले समस्या निम्त्याए पनि मेहनतीहरूका लागि दिन फलदायी रहनेछ । काममा केही चुनौती देखापर्न सक्छ । फाइदाका पछि लाग्दा साथीभाइ टाढिन सक्छन् । खर्च बढ्नुका साथै अर्थ अभाव महसुस हुनेछ । चुनौती पन्छाउँदै होसियारी साथ काम लिनुपर्ने समय छ ।
तपाई भित्र नेतृत्व गुणहरूको कारण, परिस्थितिलाई सबै प्रकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहन सफल हुनुहुनेछ । व्यक्ति र परिवारका सदस्यहरू तपाईको सार्वजनिक परिचय मार्फत लाभान्वित हुनेछन् र तपाईले ती मानिसहरूलाई सहयोग गर्नको लागि समाधान प्राप्त गर्नुहुनेछ । दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिनेछ । बौद्धिक चिन्तनले नयाँ विचार जन्माउन सक्छ । तार्किक क्षमता बढ्नेछ र अध्ययनमा प्रगति हुनेछ ।
तपाईं निराश महसुस गर्नु अघि, तपाईंले एक विश्वसनीय व्यक्तिबाट सल्लाह लिनु पर्दछ । बजारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले कामसँग सम्बन्धित प्रयासहरूमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ, धननाश हुन सक्ला । भौतिक साधन बिग्रनाले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएला। सावधानीले सामान्य फाइदा उठाउन सकिनेछ । व्यावसायिक काममा खर्च बढ्नेछ भने अरूका काममा महत्वपूर्ण समय बित्न सक्छ । तापनि, सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ ।
विवाह सम्बन्धी निर्णय लिने बित्तिकै व्यक्तिको विगतको बारेमा पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, समस्याबाट बच्नुहोला । अरूमा बढी भर पर्नुको सट्टा तपाईको लुकेको प्रतिभा पहिचान गर्नाले विभिन्न अवसर आउन सक्ला । प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । यात्रामा विशेष लाभ होला । परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि प्रतिष्ठा जोगाउन सकिनेछ । बोलीको कारणले केही समस्या उब्जिए पनि सहयोगीहरुले फाइदा दिलाउनेछन् । टाढाको यात्राको संभावना छ ।
काम गर्ने ठाउँमा तपाईंका सहकर्मी र कर्मचारीहरूसितको सम्बन्ध बिग्रन नदिनुहोस्, राम्रो अवस्था आउन सक्ला । अन्यथा कार्य क्षमता प्रभावित हुन सक्छ । कुनै निर्णय लिनमा हतार गर्नु उचित हुँदैन । भूमि वा पैत्रिक सम्पत्तिमा विवाद आउन सक्छ । तापनि प्रतिष्ठित कामको जिम्मेवारी पाइनेछ । सानातिना काम र घरेलु समस्यामै अल्झनुपर्ने देखिन्छ । अर्थ अभावले योजना स्थगित हुन सक्छ ।
व्यापारमा निर्णय तपार्ईँकै पक्षमा फैसला हुनाले खुसीले उचाइ नाघ्नेछ । पढाइ लेखाइमा नसोचेको सफलता हात लाग्नेछ । आफन्त तथा मावली पक्षबाट भनेजस्तो सहयोग पाइने हुँदा आँट तथा पराक्रम बढेर जानेछ । आफ्ना काम स्थगित हुनाले मन खिन्न हुनेछ । सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा मिल्ने समय छ । केही अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन खिन्न रहनेछ । सोचेको काम पनि नबन्न सक्छ ।
यो साता व्यापार व्यावसायमा सन्तोषजनक फाइदा हुनेछ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन अलि बढी नै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ । मायाप्रेममा धोका हुन सक्छ भने एकोहोरो माया प्रेमले सताउनेछ । सन्तान तथा छोरा छोरिबाट तपाईंको काममा सहयोग हुने छैन । टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ । कामको तारिफ हुनाले उत्साह बढ्नेछ । बिस्तारै सोचेको काम बन्नेछ । नाम, दाम र इनाम कमाउने समय छ । रोगले पनि सताउने देखिन्छ ।
आज चम्किँदैछ यी राशि भएकाहरुको भाग्य
मेष धैर्यले काम लिने समय छ । जीवनसाथी, सन्तति वा विपरीतलिङ्गी साथीसँग सम्बन्ध आत्मीय बन्नेछ । मातृधनबाट लाभ प्राप्त हुने सम्भावना छ । महत्त्वाकाङ्क्षी योजना फलीभूत हुनसक्छन् । वृष धर्मकर्म र समाजसेवामा वि...
जेठ ८ देखि १४ गतेसम्म तपाईंको दिन कस्तो रहला ? साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस्
मेष व्यवसाय क्षेत्रमा काम अधिक हुनेछ र परिणाम कम हुनेछ । राम्रा काम लगभग अधुरो हुनेछ। सरकारी मामिलामा लापरवाही नहुनुहोस् । कार्यालयको वित्त सम्बन्धित काम धेरै सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। यो हप्ता लागि शुभअङ्क : ...
कार्यपालिका सदस्य चयनका लागि कैलालीमा निर्वाचन प्रक्रिया शुरू
Email: lokaanta[email protected]